Faaiidooyinka Subaga idaha u leeyahay Rag iyo dumar | WARARKA PUNTLAND
Home Caafimaadka Faaiidooyinka Subaga idaha u leeyahay Rag iyo dumar
Faaiidooyinka Subaga idaha u leeyahay Rag iyo dumar
waxaa marba soo baxaya faa iidooyinka ay xoolaheenu leeyahay waxaan halkaan idiinku haynaa faa iidooyinka subaga idaha u u leeyahay rag iyo dumar.
6- Xanuunka neerfaha ee sinta ku dhaco ee loo yaqaanno “Sciatica”
8- Waxaa lagu daaweeyaa gaas calooleedka ee nooca “Ulcer” ka ah.
Marka su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah:
Maxaa ka jiro in Subaga Idaha uu daaweeyo xanuunadaas kor aan ku soo xusay?
1- Barida wanka ama idaha waa sida kuruska geela oo kale waxaa lagu keediyaa wixii nafaqo ah oo hadhow xilliyada abaarta ah uu ka faa’idaysto xayawaanka inuu jirkiisa ku nafciyo, sidaas awgeed xoolaha wixii la siiyo ayay keedsadaan, haddii geedo dabiici ah uu daaqo oo aan la siinin waxyaabo la farsameeyay ama aan al daajin meelo wasakh ah ama magaalada aanan lagu korin, faaidadiisa way ka badan tahay midka lagu soo koriyaya waxyaabaha aan dabiiciga ahayn.
2- Midda kale sida la wada ogyahay subaga xoolaha waxaa loo qeybiyaa laba nooc, nooc waxaa la yiraahdaa jirka dhibaato ayuu u leeyahay waa nooca Kolestaroolka keeno oo la dhaho “Saturated Fat”, noocne waxaa la yiraahdaa faa’ido ayuu leeyahay oo waxaa loo yaqaanaa “unsaturated fat”, sidaa awgeed haddii idaha la daajiyo dhul nadiif ah oo dabiici ah, subaga laga heli karo barida wuxuu noqonaa mid si dabiici ah ku yimid waana “Unsaturated Fat”, waxaana subagaan ku jirto maado la yiraahdo “OMEGA”.
Maadadaan waaye waxa jirka faa’ido uu ka helo oo inta kor ku xusan iyo ka badanba waa laga helaa.
Maadaama dagaal culus lagu hayay wax kastoo dufan ah cabsi laga qabo cudurka Kolestaroolka, laakiin iyadane waa muhiim in la kala ogaado subaga khatarta ah iyo midka faa’idada leh, waana muhiim in la ogaado subag la’aan jirka ma shaqayn karo oo waa u muhiim, sidaas awgeed in aad dooratid midka faa’idada leh ama aad badsatid cunnada laga helo waa lagama maarmaan.
Xanuunada kor ku xusan oo ay soomaalida ku daaweyso subagaan, qaar ka mid ah waa wax cilmibaaris lagu arkay, qaarne waa wax khibrad iyo aragti lagu arkay.
Mana ahan soomaalida dadka kailya ee isticmaala Subaga Idaha, wanka ugu fiican ee laga helo subagaan la isku daaweeyo waa nooca madaxa madow oo barida weyn leh, seenta gaaban leh, waana wananka u badan dhulkeena.
Waxa aad loola yaabo ee cilmibaarayaasha sheegaan waa in wadna xanuunka iyo ka hortagga baruurta fadhiisato xididada in lagu daaweeyo Subaga Idaha iskaba daa inuu keeno Kolestarool.
Waxaa kaloo iyadane la arkay in dadka qabo xanuunka gaaska ee “Peptic Ulcer” oo aysan keenin bakteeriyada “H.Pylori” iyagane in lagu daaweeyo oo la arkay in boogta caloosha ay si dhakhso ah ku raysato.
Sidaas awgeed waxaan ku soo gabagabaynayaa jawaabtayda in Subaga Idaha oo la isku daaweeyo in uu ka mid yahay talooyinka caafimaad ee rasuulkeena nabad galyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu noo reebay, waana arrin sanooyin badan la soo isticmaali jiray, waxaana isa soo taraya cilmibaarista taageersan isku daaweynta Suabaga Idaha.
Qaabka loo diyaariyo subaga ayaa ah in barida markii la shiilo oo la sooco subaga cad ee soo hara ee fadhiisto waaye midka la isku daaweeyo siyaabaha la isugu daaweeyane waa in la cabo ama la marsado.
Haddii aad heli karto Wan jabsaday oo caafimaad lagu soo koriyay, yuusan ku dhaafin, in jirkaaga uu ku milmay waxaad ku ogaan kartaa adigoo dheecaanada jirkaaga sida dhididka, candhuufta, kaadida laga dareemo shirifka ama carafta subagga.
This post has already been read 159924
Previous articlePuntland oo laga xusay maalinta dhalinyarada Aduunka
Next articleMadaxweyne Gaas oo saxiixay in Amisom la keeno Garoowe, Gaalkacyo iyo Bosaaso. Fashilan iyo guul-darro hor leh Puntland.